शुक्र ग्रह सिंह राशिमा रहँदा तपाईंलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? जान्नुहोस्।, What effect does Venus have on Leo? Know, शुक्र ग्रह, Venus Planet, शुक्र ग्रहको गोचर फल, शुक्र ग्रह, सिंह राशि, Venus, Leo Sign | Mero Jyotish
शुक्र ग्रह सिंह राशिमा रहँदा तपाईंलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? जान्नुहोस्।
शुक्रको गोचर साउन १ गते दिउँसो १४:५७ बजेदेखि २६ गते बेलुका २०:४० सम्म सिंह राशिमा रहनेछ। शुक्रको लागि सिंह राशि खासै राम्रो होइन, त्यसैले शुक्रले यस राशिमा धेरै राम्रो नतिजा दिन सक्ने छैन। शुक्र प्रेम, सौन्दर्य र रोमान्सका स्वामी हुन्, त्यसैले यस अवधिमा यी क्षेत्रहरूमा घाटा हुने सम्भावनाहरू छन्। आउनुहोस् जानौं कि शुक्र ग्रह सिंह राशिमा रहँदा कुन-कुन राशिलाई कस्तो-कस्तो प्रभाव पर्छ ?
शुक्र ग्रहको सिंह राशिमा परिवर्तनले १२ राशिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यो गोचर मेष राशिबाट पाँचौं घरमा हुनेछ जुन शिक्षा, प्रेम, रोमान्स र परिवारको लागि हो। यो चरण मेष राशिको लागि सकारात्मक हुनेछ। प्रेम र रोमान्सको क्षेत्र राम्रो हुनेछ। यद्यपि विवाहित जोडीहरू यस समयमा सावधान हुनु आवश्यक छ, त्यहाँ केही असहमति हुन सक्छ। मेष राशि र उनीहरूको पति / पत्नीले व्यवसायिक सफलता प्राप्त गर्नेछन्। पैसा मनोरन्जनमा खर्च हुनेछ। यस अवधिमा विद्यार्थीहरू ध्यान विचलित भएको महसुस गर्न सक्छन् र खेल र सामाजिक संजालमा अधिक ध्यान दिन सक्छन्।
शुक्रको गोचर तपाईंको राशिबाट चौथो घरमा हुनेछ। यो समयमा तपाईं आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग स्तरीय समय बिताउन सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंको सम्पत्ती र जग्गा सम्बन्धी क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू हुन सक्छन्। यसैले तपाईलाई यस अवधिमा कुनै पनि किसिमको लगानी नगर्न सल्लाह दिइन्छ किनकि यसले तपाईंलाई केहि समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। यस बाहेक, तपाईंको सम्पत्ति / जग्गा सम्बन्धी कारणले कानुनी समस्या हुन सक्छ, त्यसैले यस अवधिमा संघर्ष वा लडाईबाट जोगिन प्रयास गर्नुहोस्। यो अवधि तपाईंको व्यक्तिगत खुशी जस्तै प्रेम, रोमान्स र विवाहित जीवनमा सद्भावको लागि राम्रो हो।
शुक्रको गोचर तपाईंको राशिबाट तेश्रो घरमा हुनेछ र तपाईंको शिक्षा र बुद्धि सम्बन्धि पाँचौ घर र विदेशी भूमि र खर्च सम्बन्धि बाह्रौं घरको शासन गर्नेछ। यो गोचरले तपाईंलाई मिश्रित परिणाम दिनेछ। तपाईको वार्तालाप कसैलाई मनाउन पर्याप्त प्रभावशाली हुनेछ। तपाईका भाईबहिनीहरू तथा नजिकका र प्रियजनहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। यसले तपाइँलाई सृजनात्मकता, नवीनता र राम्रो लेख्ने कला पनि दिन सक्छ। जो रचनात्मकता, मिडिया, खाद्य उद्योग र शिक्षाको क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित छन् उनीहरूले यस अवधिमा राम्रो सुविधाहरू पाउनेछन्। शिक्षा र विदेशी स्रोतहरूले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि पेशेवरहरूले अफिसमा धेरै सम्मान पाउने छन्। व्यापारीहरूले सम्पत्ति जम्मा गर्नेछन्। व्यवसायिक यात्रा हुन सक्छ जो लाभदायक साबित हुनेछ। विवाहित व्यक्तिहरूमा सकारात्मकता हुन्छ र सबै प्रकारका गलतफहमीहरू हट्नेछ।
शुक्रको गोचर तपाईंको राशिबाट दोश्रो घरमा हुनेछ र सुख र वाहन आदिसँग सम्बन्धित चौथो घर र आयसँग सम्बन्धित एघारौँ घरमा शुक्रको शासन हुनेछ। यसको परिणाम स्वरूप पारिवारिक व्यवसाय फस्टाउनेछ। परिवारका आफुभन्दा साना सदस्यहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार यस अवधिमा विस्तार हुन सक्छ। पेशेवरहरूले पदोन्नति र वित्तीय स्थिरता प्राप्त गर्नेछन्। यद्यपि प्रेमको मामिलामा धेरै कठोर नहुनुहोस् र आफ्नो पार्टनरको धारणा बुझ्न लचिलो हुने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईंको नरम बोलीले यस अवधिमा अरुलाई आकर्षित गर्न सक्छ। तपाईंले यस समयमा सामाजिक सम्मान पाउनुहुनेछ।
शुक्रको गोचर तपाईंको राशिमा वा लग्नमा हुन्छ र यसले पराक्रम तथा बन्धु सम्बन्धि तेश्रो घर र आजीविका वा काम सम्बन्धि दशौँ घरमा शासन गर्नेछ। यो सिंह राशिका व्यक्तिको लागी राम्रो समय हो। तपाईं मानसिक शान्तिको आनन्द लिनुहुनेछ। तपाईंको जीवनमा प्रेम, सद्भाव र सम्बन्ध राम्रोसँग कायम हुन सक्छ। भाग्य अनुकूल हुनेछ र यसले प्रायः मुद्दाहरूको समाधान गर्दछ। रचनात्मक व्यक्तिहरू यस समयमा सफल हुनेछन् । तपाईको क्यारियरमा पदोन्नति हुनेछ। यद्यपि धेरै चाहनालाई वेवास्ता गर्नुपर्दछ, अधिक इच्छाले सफलताको मार्गमा अवरोध हुन सक्छ किनकि यसले ध्यान विचलित हुन सक्छ। व्यवहार सुधार हुनेछ र समाजमा प्रतिष्ठा र ख्याति बढाउन सक्ने समय छ। यो समय अध्यात्म तिर मन लाग्न सक्छ जसले गर्दा अन्तरआत्मामा सुधार गर्दछ। समग्रमा यो सकारात्मकताको अवधि हो।
यो गोचर कन्या राशिबाट बाह्रौं घरमा हुनेछ। यो चरण कन्या राशिका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। स्वास्थ्यलाई विशेष हेरचाह चाहिन्छ। केहि वित्तीय समस्याहरू हुनसक्दछन् जसले गर्दा पैसालाई धेरै सावधानीपूर्वक चलाउनु पर्छ। यस अवधिमा तपाईं ऋणबाट टाढा रहनु पर्छ। सबै स्रोतहरूको उत्तम उपयोग गरेर बढी पैसा संकलनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले धेरै फाइदा लिनेछन्। साथै विदेशी परियोजनामा ​​रहेका व्यवासायीहरू लाभान्वित हुनेछन्।
शुक्रले तपाईंको राशिबाट एघारौँ घरमा गोचर गर्नेछ भने र यसले तपाईंको लग्न र आठौँ घरमा नियन्त्रण गर्नेछ। यो गोचरले तुला राशिका व्यक्तिहरुको जीवनमा धेरै सकारात्मकता ल्याउनेछ। तपाईंले कामको माध्यमबाट राम्रो लाभहरू पाउने सम्भावना छ। तपाईंको कार्यहरू यस अवधिमा सफल हुनेछ । अनुसन्धान, तांत्रिक, रहस्यवाद, रचनात्मकता र डिजाइनिंगमा संलग्न व्यक्तिहरूले यस गोचरमा राम्रो फाइदा पाउनेछन्। परिवार र साथीहरूले पनि सहयोग गर्नेछन्। तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई अधिक महत्वाकांक्षी हुन र धेरै अपेक्षाहरू हुनबाट जोगिन सल्लाह दिइन्छ। प्रेम र रोमान्स राम्रो रहनेछ। विवाहित व्यक्तिको जीवन सामञ्जस्यपूर्ण हुनेछ। यस समयमा केही रहस्यमय घटनाहरू पनि हुन सक्छन्।
शुक्रको तपाईंको राशिबाट कर्म स्थान वा दशौं स्थानमा गोचर भइरहेको छ भने यसले वैवाहिक जीवन सम्बन्धि सातौँ घर र खर्च, विदेश तथा दण्डसजाय सम्बन्धि बाह्रौँ घरमा नियन्त्रण गर्नेछ । यस समयमा पेशेवरहरूले वरिष्ठहरूको समर्थन पाउनेछन्। सहकर्मीहरूलाई कुराबुझाउन कठिन र गाह्रो हुन सक्छ। तिनीहरूले तपाइँलाई गलत अर्थ लगाउन सक्छन्। आयात-निर्यातसँग सम्बन्धित व्यवसायमा लाभ हुनेछ। वित्तीय स्थिरता हुनेछ, जसको कारणले जीवनमा शान्ति फैलनेछ। मिडिया र फिल्महरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उनीहरूको सृजनात्मकताको कारण अधिकतम लाभ उठाउनेछन् र प्रशंसा पाउनेछन्। परिवारिक र वैवाहिक जीवन समृद्ध हुनेछ।
शुक्रले तपाईंको राशिबाट भाग्य स्थान वा नवौं स्थानमा हुनेछ भने रोग तथा शत्रु सम्बन्धि छैठौं घर र आय तथा नाफासँग सम्बन्धित एघारौं घरमा शासन गर्नेछ । यो अवधिमा धनु राशिका व्यक्तिहरु होसियार रहनुका साथै अधिक बोल्नबाट बच्नुपर्छ। बुबासँग केही मतभेद हुन सक्छ जसले घरमा तनाव उत्पन्न गर्दछ। तन्त्रमन्त्र, रहस्यवाद, कानून र अनुसन्धानका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यस गोचरको अवधि राम्रो फाइदाहरू पाउनेछन्। चीजहरू सिक्नको लागि तयार हुनुहोस्, तपाईं लुकेका ज्ञानको क्षितिज अन्वेषण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। विवाहित व्यक्तिहरुको लागि राम्रो समय हुनेछ।
यो गोचर मकर राशिबाट आठौं घरमा हुनेछ। यो घरले जीवनको आयु, जीवनका सङ्कटहरु, जीवनमा रहस्यमय घटनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो गोचर मकर राशिको लागि शुभ हुँदैन। यस अवधिमा, अचानक तपाईंको काममा उतार चढावहरू आउँछन्, जसले तपाईंलाई यस अवधिमा अचानक बृद्धि र गिरावट दिन सक्छ। व्यक्तिसँग व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा होशियार हुनुहोस् र यस अवधिमा सबैलाई विश्वास गर्नबाट बच्नुहोस्। तपाईंको क्रोध र आक्रमकता नियन्त्रण गर्नुहोस्। यस अवधिमा बहसहरूमा सामेल हुनबाट जोगिनुहोस्। बच्चाहरूलाई ध्यान आवश्यक पर्दछ किनकि तिनीहरू गलत संगतमा पर्न सक्छन् र तिनीहरूको स्वास्थ्य पनि बिग्रिन सक्छ। यद्यपि वित्तीय स्थिरतामा बाधा पर्ने छैन। बरु त्यहाँ अपेक्षित स्रोतहरु बाट आर्थिक लाभ हुन सक्छ।
यो गोचर कुम्भ राशिबाट सातौं घरमा हुनेछ। सातौं घरले विवाह र वैवाहिक सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्दछ। जीवनसाथीबाट सबै प्रकारका प्रयासहरूमा पूर्ण समर्थन प्राप्त हुन्छ। जबकि त्यहाँ केहि मतभेद हुन सक्छ जसबाट बच्नु पर्छ। व्यापारीहरूले धेरै फाइदा लिनेछन्। व्यापार साझेदारहरू बीच समझदारी पनि ठीक हुनेछ। पेशेवरहरूले सीपहरू सुधार गर्न निरन्तर प्रयास गर्नु आवश्यक छ। यस समयमा कुम्भ राशिको व्यक्तिहरूको चरित्र बढ्नेछ। यस राशिका महिलाहरुले शृंगार र सौन्दर्य सम्बन्धि कुरामा पैसा खर्च गर्दछन्। यो गोचरको समय विद्यार्थीहरु पढाईमा प्रगति गर्न सक्नेछन् ।
शुक्र तपाईको राशिबाट छैठौं घरमा गोचरमा आउनेछ। छैठो घरले शत्रु, ऋण, तर्क र युद्ध आदिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पेशेवरहरूले अत्यन्त सावधान हुनुपर्दछ र उनीहरू विपक्षीहरूदेखि सावधान हुनु आवश्यक छ किनकि उनीहरू खतरनाक हुन सक्छन्। स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक पर्दछ किनकि केही रोगहरू हुन सक्दछन्। तपाईं यस अवधिमा विपरीत परिस्थितिबाट माथि उठ्नुहुनेछ। तपाईको अनुभवले तपाईलाई यस अवधिमा तपाईको सफलता र विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। शोध, अनुसन्धान, विदेशी भूमि वा गुप्त विज्ञानद्वारा तपाइँलाई लाभ हुन सक्छ। तपाईंको सन्तानसँग केहि समस्या हुन सक्छ। मीन राशिका व्यक्तिहरूले यस गोचरको अवधिमा बोल्दा ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक विवादबाट टाढा रहनुपर्छ।